It is me. Ko Niknayman.: စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် မျိူးချစ်မြန်မာများ၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် Overseas Burmese patriots (OBP) တို့မေးမြန်း ဖြေကြားချက်များ။
Posted by Ko Niknayman at 8:08 PM